कुलुङ - विकिपिडिया
कुलुङ किराती वंशहरू मध्यको एक जाती हुन। कुलुङहरू नेपालको उतरपूर्वी भेगमा मुख्येत सोलुखुम्बुको महाकुलुङ क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन।
१. कुलुङ जाति उत्पति कुलुङ बंशवली र मिथक अनुसार खारकी श्रीमती दुम्दिलिम गल्काम्माले मिनापोङ्खो हाल्कुम्बुमा खोक्चीलिप जन्माइन् । खोक्चीलिपले नागी वंशका पाछोक्सी येरुकाकी छोरी वेइलिम्मासित विवाह गरे । खोक्चिलिपले वेइलिमसँग विवाह गरेपछि उनीहरुले मिनापोङ्खो हाल्कुम्बू(मानव उत्पत्तिस्थल–ब्रह्मपुत्रको मैदान)मा पहिलो मानव बस्ती बसाएर सभ्यताको सुरुवात गरे । खोक्चिलिप र वेइलिमको सन्तानका रुपमा रोदु वा किराँतको जन्म भयो । तिनै किरातका सन्तानहरु फैलिँदै जाँदा ब्रह्मपुत्र किनारबाट गंगाको उत्तरी मैदान र सिन्धू घाँटीसम्म पुगे । अधिकांश इतिहासकारले लेखेका छन् – कामरुप(आसाम) पनि भनिने मिनापोङ्खो–हाल्कुम्बूबाटै किरात सभ्यताको विकास भएको हो । ब्रह्मपुत्र वरिपरिबाट किरातीहरु समग्र उत्तरी गंगाको मैदानी भागमा विफैलिएका थिए । किरात सभ्यता सिन्दूघाँटीसम्म विकसित भएको थियो । किरातहरुले एक समय ब्रह्मपुत्रदेखि गंगाको मैदान हुँदै सिन्दू घाँटीसम्म एकछत्र किरात आवाद चलेको थियो । हड्प्पा र महनजोड्डोको सभ्यता किरातहरुकै थियो भनेर इतिहासकार दुर्गाहाङ याक्खाले दाबी गरेका छन् । खेतीपातीमा रमाएर बसेका किरातहरुको ककेसियाबाट युरोप, मध्यपूर्व हुँदै भारतीय उप–महादिप आइपुगेका आर्यहरुसँग भेट भयो । करिब ५ हजार वर्षपहिले दुई समूहबीच युद्ध हुँदा किरातीहरु हारे । आर्यहरुबाट युद्धमा हारेपछि उनीहरु क्रमशः गंगाको मैदानबाट उत्तरी हिमालय पर्वततिर लागे ।
हिमालय पर्वततिर लागेका किरात समूहको एउटा गण नायक एलम्बरले करिब ३८ सय वर्ष पहिले काठमाण्डौं उपत्यकामा अधिपत्य जमाए । एलम्बरले स्थापना गरेको राज्य एलाखोममा ३२ पुस्तासम्म किरात किरात शासन चलेको इतिहास छ । जसलाई किरात काल भनेर इतिहासमा पढिँदै आएको छ । जब लिच्छवीहरुले एलाखोम (एलम्बरको भूमि)बाट किरातहरु विस्थापित गराए, त्यसपछि उनीहरु साँखु, बनेपा हुँदै सुनकोशी जलाधार क्षेत्रमा आइपुगे र नदी किनार हुँदै पूर्वतिर लागे । उपत्यकाबाट विस्थापित भएर आएका किरात समूहहरु वर्तमान खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखम्बूका केही ठाउँमा बस्न थाले । वास्तवमा काठमाण्डौ उपत्येकाबाट विस्थापित भएर पूर्वतिर लागेको एक किरात समूहको सन्तान नै अहिलेको कुलुङहरु हुन् । कुलुङ मिथक(लोककथा)ले खोटाङको रावा उपत्यकासँग महाकुलुङ सम्बन्ध रहेको देखाउँछ । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने कुलुङका पूर्खाहरु महाकुलुङमा आउनुअघि त्यता बसोबास गर्दथे । किरात मुलका अन्य जातिको इतिहास पढ्दा कुलुङ लगायत सबै एलाखोम उपत्येकाबाट पूर्व लागेका किरात सन्तान नै उनीहरु भएको बताउँछ ।
कुलुङ मिथक अनुसार किरातका सन्तानहरु खम्बुहो, नेवाहाङ, मेत्नाहाङ, मेरात्ती आदि थिए । उनीहरुले अलग अलग ठाउँमा आफ्नो सभ्यता विकास गरेर । उनीहरु अनेकौं उप समूहमा बाँडिए । यसमा विभिन्न नदीको जलाधार क्षेत्रलाई आधार बनाएर कुलुङ मिथकले वर्णनन् गरेको देखिन्छ । लिखु– सुनुवार, सुनकोशी–दूधकोशी– खम्बू, अरुण– मेवाहाङ र तमोर– याक्थुम्बा(लम्बू) भनिएको छ । बसोबासका दृष्टिले यो कुरामा केही मेल खाएको जस्तो देखिन्छ । तर इतिहास मिथक जसरी नबगेका कारण ऐतिहासिक कसीबाट हेर्दा यो भनाइलाई केही संशोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ । सुनकोशी र दूधकोशी जलाधार क्षेत्रमा फरक पहिचान भएका दर्जन किरात जातिहरुले सभ्यता विकास गरेको देखिन्छ ।
कुलुङ मिथकमा किरात–आर्य युद्ध, उपत्यकाको किरात शासन आदिका बारेमा संकेत गरिएको पाइन्न । जसरी लिच्छवीले विस्थापित गरेपछि किरात कहाँ गए भन्ने नेपालको इतिहासमा उल्लेख छैन । तर मिथकले के संकेत गर्छ भने किरातहरु सुरक्षित बसोबासकै खोजीमा पहाडतिर लागेका थिए । मिथक अनुसार मिनापोङ्खो हाल्कुम्बूबाट गंगाको मैदान हुँदै हिमालय पर्वततिर लागेका किरातहरुमध्ये खम्बूहो वंशीय छेम्सी, ताम्सी, खप्दुलु र राताप्खु नामका चार पूर्खाहरु होङ्गु उपत्यका (वर्तमान महाकुलुङ) शिकार खेल्दै आइपुगे । शिकार खेल्दै आएका उनीहरुले कालान्तरमा यही स्थायी बसोबास गर्न पुगे । तिनै चार पुर्खा र उनीहरुका दर सन्तानले होङ्गु उपत्यकामा साझा सभ्याता र सँस्कृतिको निर्माण गरे । जसले कुलुङ भनेर अन्यत्र चिनाए । कुलुङ सभ्यता, कुलुङ भाषा र कुलुङ सँस्कृतिको निर्माण गरे । नश्लीय रुपमा एउटै समूहका छेम्सी, ताम्सी, खप्दुलु र राताप्खु चार पर्खाका सन्तानहरुलाई साझा भाषा–सँस्कृति र इतिहासले कुलुङ जाति बनाएको देखिन्छ ।
२.जातिको निर्माण कसरी ? सामान्यतः संसारमा जातिको निर्माण सँस्कृति र भूमिको आधारमा हुने गर्दछ । एउटा निश्चित भूगोलमा बस्नेहरुले साझा संँस्कृतिको निर्माण गरेका हुन्छन् र त्यसलाई अन्यले पछ्याउँछ । एउटै सँस्कृति हुनेहरुबीच भाषाले अपनत्व वा हामी भन्ने भावनाको सृजना गर्छ । समाज एउटा सुत्रमा बाँध्ने काम भाषाले गरेको हुन्छ । एउटै नश्लका मानिसहरु पनि फरक सँस्कृति, फरक भूगोल, फरक भाषा र मनोविज्ञानले अलग जातिको पहिचान बनाएको पाइन्छ । जाति निर्माणमा नश्लको नभइ सँस्कृति र भाषाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा नेवार समुदायलाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । दर्जनौ नश्लका मानिसहरु नेपाल उपत्यकामा प्रवेशपछि नेवारी सँस्कृतिलाई स्वीकार गरे, नेवारी भाषा बोले । अहिले एउटै नेवार, जातिको रुपमा साझा भाषा र सँस्कृतिले एउटा मालामा उनेको छ । नेवारी भाषा बोलेको र नेवारी सँस्कृति अंगालेकै आधारमा उनीहरु नेवार जाति भए र त्यसमा गौरव गर्छन् । नश्लीय आधारमा हेर्ने हो भने नेवार समुदायभित्र आर्य, किरात, ड्रविड, मङ्गोलियन लगायतका छन् । अर्को एउटै नश्लका भएपनि धर्मका कारण तामाङ र गुरुङहरुले किरात भन्दा अलग जातीय पहिचान बनाएका छन् । नेपाल लगायत दक्षिण एसियामा यसको दर्जनौ उदाहरण देख्न सकिन्छ ।
३. जातिको परिभाषाः कसैले आफूलाई अलग जातिको रुपमा दावी गरीरहँदा केलाई जाति भनिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ । सामान्यतः जाति राष्ट्रियताको आधारमा छुट्टिने मनुष्यको एक इकाइ, भौगालिक आधारमा अलग मानिसहरुको एक इकाइ, संस्कार वा धर्म अनुसार छुट्टिने मानव शाखा, शारीरिक बनोट वा गुण वा आकारप्रकारबाट छुट्टिने एक जीव वा निर्जीव वस्तुको इकाइ नै जाति हो । अङ्ग्रेजीमा race (नश्ल÷जाति)को अर्थ : One of the main groups that humans can be divided into according to their physical differences for example color of their skin, the Caucasian, the Mongolian etc.भनिएको छ । यसले बताउँछ कि जाति भनेको मानिसको त्यो समूहगत विभाजन हो जहाँ शारीरिक भिन्नताले छुट्ट्याइएको हुन्छ ।
४. आदवासी जाति हुने आधारहरु कुलुङ समुदायले विगत लामो समयदेखि आफूलाई अलग आदिवासी जातिका रुपमा दावी गर्दै आएको छ । कुलुङ समुदायकै अगुवाइमा आदिवासी सूचिकरण अभियानले एउटा उचाइ पायो । आदिवासी जनजाति सूचि परिमार्र्जन उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउन सरकार गठन गर्न बाध्य भयो । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा पहिलेको सूचिलाई केही परिमार्जन गर्दै कुलुङसहित थप नयाँ आदिवासी जातिको सिफारिससमेत गरी सकेको छ । कुलुङ आदिवासी जातिमा सूचिकरणका लागि सिफारिस भएपछि दाबी सही भएको पुष्टि भइसकेको छ । संसारमा आदिवासी जाति बन्नका लागि केही निश्चित आधारहरु हुन्छन् । समाजशास्त्री÷मानवशास्त्री र भाषाशास्त्रीहरु तथा अन्तराष्ट्रिय महासन्धि र घोषणा–पत्रले आदिवासी जाति हुने आधारका रुपमा छुट्टै भाषा, छुट्टै सँस्कृति, लिखित वा अलिखित इतिहास, छुट्टै आदिभूमि, हामी भन्ने भावनालाई मानेका छन् । कुलुङ समुदायसँग उल्लेखित सम्पूर्ण आधार र प्रमाणहरु रहेको छन् । छेम्सी, ताम्सी, पिल्मो, सोत्तो र नाम्लुको साझा भाषा कुलुङ, सँस्कृति कुलुङ, मौखिक इतिहास, महाकुलुङ भुमि र हामी भन्ने भावना रहेको छ ।
५. कुलुङ जातिको निर्माण कुलुङ किम्बदन्ती अनुसार खम्बूहो वंशका चारजना पूर्खाहरु हुङ्गु उपत्यका प्रवेश गरेको थिए । छेम्सी, ताम्सी, खप्दुलु र राताप्खु नामका ति दाजुभाइहरु कोही अघि र कोही पछि महाकुलुङ आएका थिए । सबैभन्दा पहिले छेम्सी आएका थिए । छेम्सीपछि राताप्खु आए । समयक्रममा ताम्सी र खप्दुलु दुई भाइ हुङ्गु उपत्येका प्रवेश गरेर बस्न थाले । राताप्खु, ताम्सी र खप्दुलु छेम्सिले बोलेकै भाषा बोल्दथे । खास उनीहरु दाजुभाइका सन्तान थिए । एउटै भाषा बोल्ने र समान सँस्कार भएका उनीहरुले आपसमा सामुहिकता जनाउन आफूलार्ई कुलु’ र्वा केई कुलु’ भनेर सम्बोधन गर्दथे । जसको अर्थ हामी सहगोत्री भन्ने हुन्थ्यो र्। कुलु’ शब्द्ध कालान्तरमा रुपान्तरण भएर्र कुलुङ’ भएको विश्वास गरिन्छ । अर्को भनाइ के छ भने व्यवस्थित बसोबासको विकास भइनसकेको अवस्थामा पहिलेका पुर्खाहरु ओडारमा बस्दथे । ओडार सामान्यतः पानी नजिकै पाइने स्थानमा हुन्थ्यो । महाकुलुङमा पहिलो प्रवेश गर्ने छेम्सी त्यस्तै ठाउँ खोजेर वर्तमान सोलुखम्बूको पावै गाविसमा पर्ने हुलु क्षेत्रमा बसे । कुलुङ भाषामा पानीसहितको ढुङ्गालाई ‘काउलुङ’ भनिन्छ । यस्तै ओडारमा बसेका छेम्सी र उनका दाजुभाइहरु ‘कुलु’ हुँदै ‘कुलुङ’ भनिए वा भए । कुलुङ पूर्खाहरु ‘काउलुङ’वाट कुलु वा कुलुङ भएको बताउँदछन् । महाकुलुङ उपत्येकालाई ‘कुलु’ नामले सम्बोधन गर्ने पुरानो चलन पनि छ । ताम्सी, छेम्सी, खप्दुलु(पिल्मो) र राप्खु(सोताङ) सबै आफुले बोल्ने भाषालाई ‘कुलुरिङ’ वा ‘ईरिङ’ भन्दथे । चारदाजुभाइले उनीहरुबीच सामुहिकता जनाउन आफ्नो भाषा र संस्कारलाई ‘कुलु रिङ–रिदुम’ नामले पुकारे । त्यही कुलु शब्द कालान्तरमा कुलुङ भयो । ‘कुलु’ शब्दले एउटै वंशका स्वःजातीय भन्ने जनाउँदछ । छेम्सि, ताम्सी, खप्दुलु र राताप्खुका सन्तानबीच कुलुङ शब्दले सामुहिकतालाई बुझाउँछ र यो साझा सँस्कृति र सभ्यता पनि हो । यही कुलुङ शब्दलाई ती चार दाजुभाइको आफ्नो साझा पहिचान बनाए र आफूलाई कुलुङ जाति भनेर चिनाए । महाकुलुङबाट संसारभर फैलिएका मानिसहरु कुलुङ भनेर चिनिन्छन् ।
मानवशास्त्री चार्लस मेकडुगलका अनुसार छेम्सी सुरुमा हुलुमा आएर बसे । पछि शिकार खेल्ने क्रममा वर्तमान छेस्काम गाविसको छेम्सीसम्म पुगे । धेरै शिकार पाइने भएकोले छेम्सी अधिकांश त्यतै बस्न थाले । त्यो कुरा पहिल्यैदेखि बस्दै आएका रुपिहाङ्छा वंशका मान्छेहरुलाई मन परेन र उनीहरुले छेम्सीलाई लखेट्ने प्रयास गर्न थाले । रुपिहाङ्छाहरुको अत्याचार सहन नसकेपछि दाइ ताम्सीलाई लिन छेम्सी रावा गए । ताम्सीलाई लिएर आएपछि छेम्सी र ताम्सी दुई दाजुभाइले युद्धमा रुपिहाङ्छाहरुलाई पराजित गरेर महाकुलुङ उपत्येकामा अधिपत्य जमाएका थिए । युद्ध सघाएको पुरस्कार स्वरुप छेम्सीले ताम्सीलाई बर्तमान छेस्काममा भूमि दिएर बसाए । (चार्लस मेकडुगल, द कुलुङ राई, अ स्टडी इन किन्शिप एण्ड म्यारिज एक्सचेन्ज, पेज १८) मानवशास्त्री चाल्र्स मेकडुगलले छेम्सी, ताम्सी, पिल्मो, सोत्तो र नाम्लु कुलुङका उप–जातिहरु हुन् भनेका छन् । मेकडुगलका अनुसार हुङ्गु उपत्येका र वरिपरिको क्षेत्र समावेशित भू–भाग कुलुङ आदिवासी जातिको किपट हो– जसलाई महाकुलुङ(विस्तारित कुलुङ भुमि) भनेर चिनिन्छ । (चार्लस मेकडुगल, द कुलुङ राई, अ स्टडी इन किन्शिप एण्ड म्यारिज एक्सचेन्ज, पेज १९)
किरात येले सम्वतमा आधारित 'चाक्चाकुर' नेपाली विक्रम सम्वतको बैशाख तथा अङ्ग्रेजी ईश्वी संवतको जनवरी जस्तै किरातको नयाँ वर्ष हो । यसलाई विशेष गरी किरात समुदायका कुलुङ जातीले आफ्नो नयाँ वर्षका रुपमा धुमधामसँग मनाउदै आएका छन् । चाक्चाकुरको पुरा नाम 'निङदोङ फाइम मिनारी-दाचाम चाक्चाकुर' हो । निङदोङ फाइम भनेको नयाँ वर्ष फेरिनु हो र मिनारी दाचामको अर्थ आफ्नै पौरखले उब्जाएको बालीनाली खानु हो । चाक्चाकुर भनेको महिनाको नाम हो । यो विक्रम सम्वतको पुष महिनामा पर्छ ।
चाक्चाकुरको वास्तविक औपचारिकता त्यँहाबाट सुरु हुन्छ जहाँ कुलुङ जातिका पुरुष तथा महिला पुर्खाहरु ढुंगेयुगको अवस्था झल्काउने तामझाम सहितको स्थानमा बसेका हुन्छन् । स्याउला तथा जंगली झारपातको प्रयोग गरी बनाइएको घरभित्र स्याउला र उनिऊ ओच्छ्याएर बस्ने गरिन्छ । यस स्थललाई मानव सभ्यता विकासको प्रारम्भिक चरणमा आधुनिक हात-हतियार तथा भाँडा-कुँडा नभएको अवस्थालाई प्रतिविम्वित गर्ने किसिमले सझाइएको हुन्छ ।
सोङली (बाँसको ढुंग्रो) मा तोङबा राखिन्छ भने हात धुने पानी पनि स-साना सोङ्लीबाट नै प्रयोग गरिन्छ । सोङलीमा पानी र पातको टपरीमा रक्सी बाँडेर खाने कामको सुरुवात गरिन्छ । पातमा ढिँडो या भात तथा बाँस या काठको कचौरा आकारको भाँडामा सिस्नु, किनिमा तथा गोरुको मासु आदि तरकारी हालेर खाइन्छ भने पातको सट्टामा चोयाबाट बुनिएको डालोमा पनि प्योग गर्न सकिन्छ । पात या काठका भाँडाहरु ढुंगेयुगको चालचलनका प्रतिक हुन् भने चोयाको डालो निरन्तर सभ्यता विकासको सूचक हो ।
खाना पकाउने तरिकाहरु पनि परम्परागत नै हुन्छ । सिस्नु तथा मासु विशेषत: माटोको भाँडामा पकाइन्छ । भात या ढिँडो चाहीँ बाँसको ढुंग्रोमा हालेर पकाइन्छ । यसरी पकाएको खानालाई कुलुङ पितितिउ भनिन्छ । तरकारी पस्काउन लोबेई (बाँसको डाडु) प्रयोग गरिन्छ । त्यसैगरी भात पस्काउन कर्चम (काठको पाता/दाबिलो) को प्रयोग गरिन्छ । आगो बाल्न अहिले प्रचलित सलाई या लाईटरको प्रयोग नगरी दुईटा ढल्सीङ ढुंगालाई एकआपसमा जुधाएर र रगडेर आगोको झिल्को निकाली झुलोमा सल्काइन्छ ।
यी सम्पूर्ण तरिका, प्रक्रियाहरु तथा भाँडाकुडाहरु एक औपचारिकता  । यसले मानवीय सभ्यताको जंगली अवस्थालाई प्रतिविम्वित गर्छ । यी औपचारिकता पश्चात खानपान तथा रमझमको सुरुवात हन्छ । वन तरुल, घर तरुल, करेलाको जरा (जरेला) लगायतका फलफूल तथा जाँड, रक्सी, पुष्टकारीको बाचासी (निगार) खाएर रमाईलो गरिन्छ ।
युवा जमातले आफ्नै किसिमले थप कार्यक्रमहरु राखेर यस चाँडलाई रमाइलो गरी मनाउँछन् । महाकुलुङ क्षेत्रमा तीन दिनसम्म लगातार ठूलो मेला लगाइन्छ । रोटेपिङ, लिङ्गेपिङ, चाकाचुली खेल्ने गरिन्छ । स्थानीय युवाहरु विभिन्न प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम संचालन गर्दछन् भने पर्देशिएका युवाहरु गाँऊ फर्किन्छन् ।
महाकुलुङ भूमिमा आफ्नो सभ्यता विकास गर्ने कुलुङ समुदाय यो भूमीको पहिलो वासिन्दा अथवा आदिवासी हुन् भन्ने एउटा प्रमाण हो चाक्चाकुर । प्रकृति तथा पितृपुजक कुलुङ समुदायले चाक्चाकुरलाई आफ्नो संस्कृतिक सम्पदाको रुपमा संरक्षण गर्दै आएका छन् । चाक्चाकुर प्रकृति र पितृ पूजाको एक बलियो उदाहरण हो ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=कुलुङ&oldid=509478" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १०:४४, १० नोभेम्बर २०१५ मा परिवर्तन गरिएको थियो।